Amagama ngongwaqa double: izibonelo
Amagama ngongwaqa double - enye yezinto ezinzima kakhulu ngokuya isipelingi. Into wukuthi lezi zincwadi kungukuthi liphinyiselwe njengabantu abashadile. Njengomthetho, endaweni yabo, kuzwakala umsindo owodwa nje. Yingakho nobunzima - engenakwenzeka orfogrammy isaziso. Yingakho ukupelwa kwamagama ngongwaqa double sebeqala zenzeke kusukela esikoleni samabanga aphansi futhi bagcina kuphela grade 7. Imithetho elawula lokhu orfogrammy ngokwanele: iphathelene ezingxenyeni ezihlukahlukene amazwi isipelingi. Ngokukhethekile kufanele anikwe sona, lapho ongwaqa double zitholakala eslphambanweni morphemes.
Amagama ngongwaqa kabili impande, njengoba umthetho, eyakho esigabeni isichazamazwi (ngokubhala ukuba bakhumbule). IsiRashiya luyinhlanganisela LJ nezicathulo.
Ngokwesibonelo, igama elithi "esivuthayo" futhi "izinso" noma "imvubelo" ukukhumbula - abawalaleli yimuphi umthetho. Lapha kumelwe siqaphele kakhulu futhi khumbula ukuthi izimpande kushintshana ongwaqa - sr (d) / - zzh-, pronunciation eside [g] Kusafanele ukubhala [zzh]. Ngokwesibonelo: squeals (.... N kubo, U h) - nawe squealing [lj] futhi.
Njengoba for inhlanganisela - SS-ke isetshenziswa igama elithi "ukuxabana 'futhi amagama owehla evela kuye (ukuxabana). Kufanele ubhale - ss - ngokuphelele - Russia -: Russia, Western Russia, Little Russia.
Khumbula ukuthi - rus- kufanele abhale elinye - ne - uma akudingekile emva Isijobelelo - ck -: rusoved, kodwa Russian. Ukwehluka - Belarus.
Ungakhohlwa mayelana inombolo. Ngokwesibonelo, igama elithi "nanye" ku impande n kulotshiwe kabili. Into wukuthi kukhona Lwaluyisiqinisekiso komunye ibinzana ukuba dtsat (eziyishumi).
Ngesikhathi amabhokisi okuhlangana kanye impande
Amagama ngongwaqa double at amabhokisi okuhlangana kanye izimpande isiRashiya ngokwanele eziningi. Lapha-ke kubalulekile ukucabangela imithetho embalwa.
Okokuqala, uma umsindo wokuqala ukukhala empandeni - ekupheleni isiqalo kuyadingeka ukusebenzisa incwadi ekhombisa umsindo lizwakalise: starless, avuse, egumeni.
Nalapha futhi, idlala obalulekile indima alternation, njengoba igama elithi "isilungulela" alubhaliwe wesitimela double (nakuba lizwakala), ngoba kukhona ukulandelana ethile.
Futhi isimiso okuphambene: bengakhulumi double ungwaqa isetshenziswa uma kwenzeka ukuthi impande iqala impumputhe: b essonnitsa, ukuhlakazeka, abonakele, yome out. Kubalulekile ukuba banamathele Isimiso esiyisisekelo ukusetshenziswa ongwaqa double: angasetshenziswa kuphela ambalwa, noma kunjalo, hhayi abathathu. Uma indlela kwemagama kuhilela confluence izincwadi ezintathu ezifanayo elilandelayo - omunye wabo kuquthiwe.
Ake sicabangele isibonelo: yawa. Leli zwi ukuxabana isenzo ezihambisana nokusakaza Isiqalo. Ngenxa yalokho, ngo uchungechunge kufanele kube ezintathu: ezimbili kusukela empandeni ukuxabana, futhi omunye ibhokisi set-top wokusabalalisa. Nokho, ngokuvumelana nesimiso eyaziwayo ngeziphonso, enye yazo kuquthiwe.
Kuyadingeka ukuba ukhumbule ukuthi igama elithi "ukubala" kubhalwe nomunye. Umthetho ofanayo igcinwa futhi amazwi esuselwe, isibonelo: kubalwa, ukubala.
Amagama ngongwaqa kabili Isijobelelo - ke Lizinga futhi participles. Ngokwesibonelo, amazwi anjengokuthi inkanuko noma cranberry bayolotshwa phansi nge n double. Zonke ngalolu daba tijobelelo - enn- futhi - Onn -.
Nasi isibonelo lomunye amazwi 3 ngongwaqa kabili Isijobelelo: sesimweni ngokomthethosisekelo, izinguquko. Qaphela ukuthi zonke lezi tiphawulo akhiwa emabito ngumuntu na - la: umthethosisekelo, isikhundla inguquko.
Ababili bangcono ku isijobelelo -n- ezintathu amazwi-okuhlukile: ingilazi, ithini izinkuni.
Tichasiso - ovanny / -evanny nemikhiqizo yabo (isib tandziso) kulotshiwe njengoba double - n- (kususwe izwi - kokuzihlanganisa, ukuhlafuna): eyayigcwele, baphanga, isiqu, ningakhathazeki (ukuyaluza)
Ngokuphathelene amasakramente, kulezi titfo tenkhulumo ezivamile Isijobelelo -nn-. Anakho indawo esimweni phambi kwethu esithi yokwenziwa, emi lesengcile. Nge lesi simiso ngokuvamile bedidekile, ngoba idatha izwi kunzima ukuhlukanisa kusukela tichasiso ngamazwi ukuthi Ubhale incwadi eyodwa n.
Ake sihlole ngamunye wale amazwi ngongwaqa double. Izibonelo: nekususa ncwadi (isiphawulo ngamazwi) - ukufunda incwadi zonke ebusuku (wenhlanganyelo) - ukufunda incwadi (wenhlanganyelo). Esinye isibonelo: nesosha kwalimala (isiphawulo ngamazwi) - alimele amasosha ukulwa esindayo (wenhlanganyelo) - leli sosha kwabonayo.
Ukubheka lezi zibonelo, kulula ukuphetha ngokuthi nenhlanganyelo -n- kabili Isijobelelo zihlukaniswa khona amazwi engaphansi noma ticalo. Lezi zimpawu zingase zibe khona njengenhlangano aggregate, futhi eceleni: abalimele e amasosha ukulwa esindayo.
Emngceleni impande nesijobelelo
Amagama ngongwaqa double ungaba nabo eslphambanweni impande nesijobelelo. Lokhu ukukhathazeka, okokuqala kunakho konke, iziphawulo nezandiso kwakhiwa kusuka kubo. Othisha bathi abafundi ngokuvamile uthole bedidekile e mthetho.
Ngokwesibonelo, ahlaziye izwi ukwakha ngamaketanga: inkungu - inkungu - inkungu. Njengoba ubona, sichasiso kwakhiwa kusukela nenkungu ibizo lakhe base izophela -n-. lapha - ungwaqa kabili izwi, okuyinto uhlala ngolimi kwakhiwa kusukela isiphawulo - akwaziwa.
Ukulala - ukuwozela - ukuwozela - nalapha kwenzeka ekumiseni isiphawulo ukuze ibizo nge -n- base yi Isijobelelo efanayo (ukuwozela). Ngaphezu kwalokho, ezimbili n ekhona lwesigodi.
Elinye icala lapho ungwaqa double imele eslphambanweni nempande Isijobelelo - a -sk- seligama. Kuphela kule nguqulo bayolotshwa phansi -ss-. Ngokwesibonelo: Odessa - Odessa (lwesithathu -C- iwukunciphisa isimiso ukungabi nakwenzeka kwento kuqondana ongwaqa ezintathu ezifanayo); Gudermes - Gudermes; Russia - Russian, Kotlas - Kotlas. Njengoba ubona, umthetho siphathelene zonke izinhlobo amagama.
Lucebe amazwi loan
amazwi Silulumagama ngongwaqa double, njengoba umthetho, eyakho isigaba olunye ulimi. Kufanele kukhunjulwe ukuthi okunye kwalezi amathokheni kabili incwadi izinsalela. Nazi ezinye izibonelo:
- Iqembu - Iqembu;
- ukusilela - ukusilela;
- amaphuzu - eziyishumi;
- ton - amabili ton;
- Corrosion - ukugqwala;
- mass - okukhulu.
ngokubhala algorithm nokudluliselwa
Ukuze kahle ukubhala igama nge unkamisa double, kumele:
Nquma ukuthi iyiphi ingxenye yokukhuluma ngayo.
Thola indlela kwemagama.
Hlola ukuze ubone ukuthi wongwaqa eslphambanweni morphemes.
Ukuze sithole tenkhulumo (isiphawulo ngamazwi noma esithi).
Thola okushiwo lucebe. Iqiniso liwukuthi zikhona amazwi, ongwaqa double eslphambanweni nempande Isiqalo okuyiwona incike ukubaluleka. Lezi, isibonelo: inkohliso (ikhophi) - kanye Hack (umkhiqizo wadala ngezandla zakhe). Esimweni sokuqala, izincwadi ezimbili njll eslphambanweni morphemes, kanti owesibili - the po- Isiqalo. Esinye isibonelo: obbegat (ukusebenzisa izikhathi eziningana) - obegat (ukuba ezindaweni eziningana ngesikhathi esifushane). Igama lokuqala o- Isiqalo, okwesibili - ob-
Ukunqamula igama ngongwaqa double sokulandela le mithetho, incwadi eyodwa isitjhijilo, yesibili eya elandelayo: ekuseni-ny, wanikezela-ni, inkungu-kodwa-uthukuthele izinhlanga.
Indawo ngokuhamba esikoleni
Isihloko Yiqiniso esikoleni kabili ongwaqa kwethulwa kancane kancane: izingane bathulelwe esikoleni sabaqalayo ngala mazwi silulumagama kanye nemikhiqizo yabo, ezifana "Iqembu", "g". Futhi, abafundi abasebasha ukufunda imithetho ukudluliswa yabo.
Ngaphezu kwalokho, ngawo esikoleni esiphakeme, e ekutadisheni morphology isihloko yethulwa kuleli ukutadisha ukupelwa ingxenye ethile yokukhuluma. Ikilasi senzeka nokubopha 8-9 impahla uphenyo, systematization yayo (isib, indaba ephathwayo "H futhi LV ezingxenyeni ezihlukahlukene yokukhuluma"), ulwazi (ukuhlaziya nasezimweni ezinzima kakhulu).
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuhlolwa i-DPA futhi ukuhlolwa ingenye nezindaba njalo enikelwe isihloko.
Umndeni Ural Ulimi: Ulimi typology
Amazwi amahle Latin elihunyushwe
Nokuncishiswa ngolimi lwesiNgisi ezisetshenziswa e-US Army
Sitolo sekudla lokuphekiwe Yalta: incazelo
Akukhona engenangozi ingxenye nasvay
Thola i-Master Degree e-Italy
I-North Bridge kule laptop: iyini? Iyiphi into ebaluleke kakhulu ebhodini le-motherboard efana na?